Misokatra anio 9: 00-16: 30
Fampirantiana ao amin'ny Lapan'ny Fahatsiarovana an'i Sanno Kusado
Azonao atao ny mahita ny ampahany amin'ilay trano taloha antsoina hoe Sanno Sodou avy amin'i Soho.
2021 / 10 / 01 AssociationGazety fampahalalana "Art Menu" nivoaka tamin'ny aprily / Mey
2021 / 10 / 01 AssociationNavoaka ny taratasy fampahalalana momba ny kolontsaina any Ota Ward "ART bee HIVE" vol.8.
2021 / 09 / 05 Raha tsy izanyMomba ny fanakatonana vonjimaika amin'ny 10 Oktobra (Zoma)
2021 / 04 / 20 Raha tsy izany"Fanamarihana ny Efitrano fahatsiarovana" (No. XNUMX) dia navoaka
2021 / 03 / 01 AssociationNohavaozina ny pejy fandraisana ofisialy
Tokutomi Soho no olona namoaka ny gazety voalohany an'ny firenena "Ny sakaizan'ny firenena" ao Japana ary ny "Kokumin Shinbun".Ny sangan'asan'i Soho, "The History of Japanese People in the Modern Age," dia nanomboka tamin'ny 1918 (Taisho 7) tamin'ny faha-56 taonany ary vita tamin'ny 1952 (Showa 27) tamin'ny faha-90 taonany.Ny antsasaky ny boky 100 dia nosoratana nandritra ny vanim-potoana Omori Sanno.Nifindra tany amin'io faritra io i Soho tamin'ny 1924 (Taisho 13) ary nonina tamin'ny anaran'ny Sanno Sosudo mandra-pahatongany nifindra tany Atami Izusan tamin'ny 1943 (Showa 18).Tao anatin'ilay trano fonenana dia nisy Seikido Bunko, izay manana boky Japoney sy Sinoa 10 XNUMX nangonin'i Soho.
Nisokatra ny aprily fahatsiarovana an'i Sanno Sosudo tamin'ny volana aprily 1986 (Showa 61) taorian'ny nandraisan'i Ota Ward ny trano fonenan'i Suho taloha avy tany Shizuoka Shimbun tamin'ny taona 1988 (Showa 63).
Izy io dia atiny Hijery panorama mampiasa fakantsary 360 degre.Afaka miaina fitsidihana virtoaly ao amin'ny Sanno Sosudo Memorial Hall ianao.
Izy io dia galerin'ny sary misy ny efitrano fampirantiana ary efitrano fahatsiarovana ny Efitrano Fahatsiarovana an'i Sanno Sodo.
Torolàlana ho an'ny mpampiasa
9:00 hatramin'ny 16:30 (fidirana hatramin'ny 16:00)